Ramadaan Kariim – Rasaasa News
Aug 22, 2009 Ramadaan
Kulo Caam wa Antum Bikhayr, waa bishii barakada iyo dambidhaafka ee Ilahay siiyey Ummada Islamka si ay shaqaystaan dambi dhaaf. Bishan oo sanadkii hal mar timaada ayaa inta lagu jiro Ilaahay Naarta ka xoreeyaa Malaayiin Muslimiin ah, oo Ilaahay waafajiyo cibaado suuban.
Hadaba, ummada Islaamka ah ee ay ka midka tahay ummada Somaliyeed waxaa u furan dambi dhaaf bishan dhaxdeeda, waxaana looga baahan yahay in ay kordhiyaan cibaadada, oo ay yareeyaan waxayaabaha keeni kar dambi.
Bisha Ramadaan, waxaa laga rabaa ruuxa sooman in uu ka hadho, wax alaale wixii keeni kar dambi ka nusqaamiya ajrika soonka. Ma aha soonku kaliya in aad joojiso cuntada ee waa in aad joojisaa, dunuubta afka, isha iyo adinkaba.
Waana in la badiyaa akhrinta Quraanka Kariimka ah